सिंहदरबारको लालपुर्जा कोसंग छ ? – SamajKhabar.com
सिंहदरबारको लालपुर्जा कोसंग छ ?
संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: १६ मंसिर २०७५, आईतवार ०५:११
गंगा बराल, काठमाडौं ।
सिंहदरबारको जग्गा कति होला र यसको लालपुर्जा कहाँ होला भन्ने विषयमा जनताको चासो बढ्दो छ । सिंहदरबारको जग्गा ८ सय ८ रोपनी रहेको छ र यसको लालपुर्जा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिसँग रहेको छ । सचिवालय अहिले संघीय संसद् सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयअन्तर्गत छ भने पहिले मन्त्रालय अन्तर्गत थियो ।
सचिवालयका प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद बेल्वासेले लालपुर्जा आफूहरुसँग रहेको बताउनुभयो । ‘लालपुर्जा सरकारको नाममा छ’ –उहाँले भन्नुभयो । राणा परिवारले सरकारलाई सिंहदरबारको जग्गा बेचेका हुन् । सिंहदरबारमा ५० भन्दा बढी सानाठूला भवन रहेका छन् । सिंहदरबारभित्र भवन बनाउने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम पनि सचिवालयकै हो । उपत्यका भवन मर्मत सम्भार डिभिजनको नाम परिवर्तन भएर संघीय संसद् सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय बनेको हो, यसको कार्यालय खुसिबुमा रहेको छ ।
व्यवस्थापन कार्यालयले विशेष गरी ३ वटा क्षेत्रलाई हेर्नेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको निवासलाई हेर्ने जिम्मा एक जना सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ९सीडीई० को रहेको छ ।
यसले कुनैपनि सरकारी कार्यालय हेर्दैन । त्यसै गरी अर्का सीडीईले सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयलाई हेर्ने गरेको भने अर्काले मन्त्री क्वार्टरको जिम्मा लिएका छन् । मन्त्री क्वार्टरमा पनि एक जना इन्जिनियर रहेका छन्, जसले त्यहाँभित्र भएका समस्यालाई समाधान गर्ने गरेका छन ।
शहरी बिकास मन्त्रालय अन्तर्गत एक मात्र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग रहेको छ । यो विभाग अन्तर्गत व्यवस्थापन कार्यालय रहेको छ । व्यवस्थापन कार्यालय बन्नु अघि २८ वटा डिभिजन कार्यालय रहेका थिए तर ती डिभिजन कार्यालयलाई अहिले प्रदेश सरकारले हेर्ने गरेको छ । सिंहदरबारमा अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको भवन बनिरहेको छ । रक्षा मन्त्रालय २२ करोड रुपियाँको लागतमा र व्यवस्थापन केन्द्र १२ करोड रुपियाँको लागतमा बन्दै गरेको छ ।
परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र गृह मन्त्रालयसँगै बनिरहेको छ भने रक्षा मन्त्रालय कानुन मन्त्रालयसँगै बनीरहेको छ । अनुसन्धान केन्द्रको भवन भने पुरानै ठाउंमा बन्दै गरेको छ । यो सिंहदरबार दक्षिण गेटसंगै रहेको छ । भूकम्पले रक्षा मन्त्रालय र अनुसन्धान केन्द्र भत्काएको थियो भने राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको भने नयाँ भवन बनेको हो ।
कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०३० साल असार २५ गते सिंहदरबार आगलागी भएको थियो । त्यति बेला रहेका पुराना भवन प्रायःजसो भत्काइएको छ । भूकम्पले महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय भत्काएपछि यी मन्त्रालय सिंहदरबारभित्र अन्य मन्त्रालयकै भवनमा राखेर काम चलाइएको छ । नाम परिवर्तन भएर बनेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय नयाँ भवनमा सरेको छ भने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालय एउटै भवनमा रहेका छन् ।
अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय र २५ मन्त्री रहेका छन् । संविधानले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई पनि मन्त्री नै भनेर बुझाउँदछ । अहिले ३ जना राज्यमन्त्री छन् भने सहायक मन्त्री छैनन् । सरकारले सिंहदरबारभित्र नयाँ संसद् भवन बनाउने तयारी गरेको गरेको बर्षौ बितिसक्दापनि अहिलेसम्म भवन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छैन । आफ्नै भवन नहुँदा सरकारले नयाँ बानेश्वरमा रहेको संसद् भवन प्रयोग गरेबापत वार्षिक १५ करोडभन्दा बढी रुपियाँ तिर्दै आएको छ ।
१६ मंसिर २०७५, आईतवार ०५:११ मा प्रकाशित